သင်၏မိုဘိုင်းနှင့်ကွန်ပျူတာအတွက် Google Stadia ကို ၂ လအခမဲ့ဖြစ်သည် Androidsis
Google Stadia ကိုနှစ်လအခမဲ့စမ်းကြည့်ပါ၊ စွဲပါ!
ဂူးဂဲလ်က၎င်း၏တရားဝင်ဘလော့ဂ်ကိုယူလိုက်ပါတယ် မင်းမှာ Google Stadia ကိုနှစ်လအခမဲ့ပေးတယ် သင့်ရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းကနေခံစားချင်တယ်။ ဂူးဂဲလ်၏ဂိမ်းလွှင့်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံစားရန်အလွန်ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းနှင့်အမှန်တရားသည်ကြီးထွားနေသည်။
နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်တ ဦး တည်းရှိသကဲ့သို့ ကောင်းသောဖိုင်ဘာ optic ဆက်သွယ်မှုဒေါင်းလုပ်ဆွဲယူပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိသောဂိမ်းအတွေ့အကြုံကိုပေးသည်။ ၎င်းကို LG Gram နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းတွင်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်သည်။ အမှန်တရားမှာ၎င်းသည်ချိတ်ထားသည်။
ပထမ ဦး စွာ Google Stadia ပြောတာ သူကကျွန်မတို့နဲ့အတူလအနည်းငယ်ရှိနေပါပြီ ၎င်းသည် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် အရည်အသွေးမြင့်မားသောအခမဲ့ဂိမ်းများကိုခံစားပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Destiny2နှင့် GRID ကဲ့သို့အခြားလများအနေဖြင့်ဤ ၂ လမှလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်သည်။
ထိုအခါသင်ဤဂိမ်းကို ၀ ယ်ရန်တစ်လလျှင်ယူရို ၉ ဒေါ်လာခန့်သာပေးရသည် Rockstar အားကစားပြိုင်ပွဲမှ Red Red Remeption2သင့်အနေဖြင့်ဂရပ်ဖစ်များစွာမပါဘဲအကောင်းဆုံးသောဂရပ်ဖစ်အရည်အသွေးကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။
ဟုတ်ကဲ့လိုပဲ၊ သင်ပျော်ရွှင်နိုင်ပါလိမ့်မယ် Pixel လို high-end ရှိရင်, Samsung နှင့်အခြားအချို့။ ငါတို့မကြိုးစားခဲ့ဖူးပေမဲ့အဲဒါကငါတို့ကိုပါးစပ်ထဲမှာအလွန်အရသာရှိစေခဲ့တယ်။ LG Gram တွင်ကောင်းမွန်သော laptop ဖြစ်သော်လည်း၎င်းတွင်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်မရှိသော်လည်း GRID သည်အလှအပအတွက်ပျော်စရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုပြောင်းလဲရန်မစဉ်းစားပါက Google Stadia ကိုအထူးအကြံပြုလိုသည်။
ဟုတ်ပါတယ်, ဂိမ်းနေဆဲသော်လည်း, ကင်းမဲ့ ပြီးခဲ့သည့် DOOM ကဲ့သို့အချို့သောပစ္စည်းဥစ္စာရှိပါတယ်။ Google Stadia ၏နှစ်လတာကိုခံစားနိုင်ရန်ဤနေရာမှရပ်ပါ။ စမ်းသပ်မှု2လအခမဲ့ Google Stadia.
ဝက်ဘ်မှသာမှတ်ပုံတင်ပါ။ သင်၏မိုဘိုင်းမှ Google Stadia အက်ပ်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပါ ပြီးတော့အဲဒါကနေအခမဲ့ကစားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ။ မဟုတ်ရင်မင်းရဲ့ PC ကနေရိုက်ကူးလို့ရပေမယ့် streaming ကပြီးပြည့်စုံဖို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့ connection လိုအပ်တယ်။ ဒါဆိုအသေးစိတ်အချက်အလက်မလိုအပ်ဘဲကောင်းမွန်တဲ့ဂိမ်းအတွေ့အကြုံအတွက်ပြင်ဆင်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ဂိမ်းများ » Google Stadia ကိုနှစ်လအခမဲ့စမ်းကြည့်ပါ၊ စွဲပါ!